Q : Turiyar Store ကရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်းတွေက အရည်အသွေး စိတ်ချရရဲ့လား ?
A : Turiyar Store ဆိုပြီး တည်ထောင်ထားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ဂီတတူရိယာ ပစ္စည်းများကို ပစ္စည်းမှန် ဈေးနှုန်းမှန်ဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲနိူင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအားပေးနိူင်ပါတယ်။
Q : ပစ္စည်းအမျိုးအစားကရော စုံလင်ရဲ့လား ?
A : ကျွန်တော်တို့ Turiyar Store မှာ တူရိယာပစ္စည်းမျိုးစုံရော တူရိယာပစ္စည်းများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Accessories များပါ တစုတဝေးထဲ ရှိပါတယ်။
Q : အာမခံရော ဘယ်လိုပေးလဲ သိချင်ပါတယ် ?
A : မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားဝင်ဖြန့်ချိခွင့်ရ ကုမ္ပဏီများမှ တစ်ဆင့်သာ ရောင်းချသောကြောင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်မှု၊ ပစ္စည်းစစ်မှန်မှု၊ အမှန်တကယ်ပေးသော အာမခံတို့နှင့်အတူ ယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူအားပေးနိူင်ပါတယ်။
Q : အာမခံ ဘယ်နှစ်လပေးလဲ ?
A : Turiyar Store မှ ဝယ်ယူအားပေးသော ပစ္စည်းများကို အာမခံ ( 12 ) လ တိတိ ပေးထားပါတယ်။
Q : အိမ်အရောက်ပို့ စနစ်ရော ရှိလား ? ဘယ်လိုများပို့ဆောင်ပေးပါလဲ ?
A : ၁ သိန်းနဲ့ အထက် ဝယ်ယူအားပေးရင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မြို့တွင်းဆို ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ အခြား မြို့နယ်များမှဆိုရင်လည်း ကားဂိတ်၊ ရေဆိပ် သို့ ပို့ပေးပါတယ်။ ၁သိန်းအောက် ဝယ်ယူအားပေးပါက ပို့ဆောင်ရမည့် ပစ္စည်းနှင့် နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ပို့ဆောင်ခ ၅၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၀၀ ကြား ကျသင့်ပါမယ်။
Q : Online က တစ်ဆင့် ပစ္စည်းမှာရင် Cash On Delivery နဲ့ အားပေးလို့ရလား ?
A : ဟုတ်ကဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေလို့ရပါတယ်။ အခြားမြို့နယ်တွေကတော့ ဘဏ်မှ ငွေလက်ခံရရှိမှ ပစ္စည်းပို့ပေးပါတယ်။
Q : Online က ပစ္စည်းမှာရင် ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲ ?
A : ဝယ်ယူသူမှ ဖုန်းနံပါတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခဗျ။ အရောက်ပို့စနစ်ကို ရွေးချယ်ထားပါက ပစ္စည်းမပို့ခင် store မှ ဝန်ထမ်းက ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းကို လာယူလိုပါကလည်း လာယူနိူင်မယ့် အချိန်နှင့်နေရာအား store ဝန်ထမ်းမှ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။
Q : ဘယ်နှရက်အတွင်း အရောက်ပို့ပေးလဲရှင့် ?
A : ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မြို့တွင်းဆို နှစ်ရက် မှ လေးရက်အတွင်း ရောက်ရှိအောင်ပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ (ပိတ်ရက်ရှည်များမပါ)
Thank You for Our Customer